အဂွေရို ကို ပြန်ခေါ်မယ့် မန်စီးတီး ၊ အင်္ဂလန် ပြန်ရောက်လာနိုင်တဲ့ ဂါရတ်ဘေးလ် ၊ အပြောင်းအရွှေ့နဲ့ အပြိုင်ကြမ်းပြနေတဲ့ ကိုဗစ်တို့နဲ့ . . . ယနေ့ အတွက် နောက်ဆုံးရ အားကစား သတင်းများ - xyznews.co
အဂွေရို ကို ပြန်ခေါ်မယ့် မန်စီးတီး ၊ အင်္ဂလန် ပြန်ရောက်လာနိုင်တဲ့ ဂါရတ်ဘေးလ် ၊ အပြောင်းအရွှေ့နဲ့ အပြိုင်ကြမ်းပြနေတဲ့ ကိုဗစ်တို့နဲ့ . . . ယနေ့ အတွက် နောက်ဆုံးရ အားကစား သတင်းများ
ကီရန် ထရစ်ပီယာ ကို အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် ကနေ ခေါ်ယူ နိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်တဲ့ နယူးကာဆယ် ဟာ ရီးရဲ မက်ဒရစ် တောင်ပံ ကစားသမား ဂါရတ်ဘေးလ် ကို ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စား လာခဲ့တယ်လို့ သတင်း ပေါ်ထွက် လာခဲ့ ပါတယ် ။
နယူးကာဆယ် ဟာ ဘေးလ် အတွက် ပေါင် သန်း ၂၀ ဝန်းကျင် မျှော်လင့် ထားပြီး မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် တိုက်စစ်မှူး အန်တိုနီ မာရှယ် ကိုလည်း ချိတ်ဆက်ဖို့ စီစဉ် နေတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ စီးတီး အသင်း ကတော့ နှလုံး ဝေဒနာကြောင့် စောစီးစွာ အနားယူလိုက် ရတဲ့ တိုက်စစ်မှူးဟောင်း ဆာဂျီယို အဂွေရို ကို အသင်းရဲ့ ကမ္ဘာလုံး ဆိုင်ရာ သံတမန် အဖြစ် ခန့်အပ်ဖို့ လုပ် ဆောင် နေပြီလို့ သတင်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
မန်စီးတီး နည်းပြ ဂွာဒီယိုလာ နဲ့ ပထမ အသင်းသား ၇ ဦးဟာ ကိုဗစ်ပိုး တွေ့ရှိ ခဲ့တာကြောင့် ဒီတပတ်မှာ ကစားမယ့် FA Cup ပွဲစဉ် ကို အရန် နည်းပြက တာဝန်ယူ ကိုင်တွယ် သွားမယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
ဘန်လေ နည်းပြ ရှောင် ဒွိုက်ချ် ဟာလည်း ကိုဗစ် ဖြစ်နေတာကြောင့် ဟတ်ဒါဖီးလ် နဲ့ ကစားမယ့် FA Cup ပွဲကို မကြီးကြပ် နိုင်တော့ဘူးလို့ သိရ ပါတယ် ။
ပရီးမီးယားလိဂ် အသင်းတွေ ကြားမှာ ကိုဗစ် ကူးစက်မှုတွေ မြင့်မား လာပေမယ့် FA Cup ကို မဖြစ် မနေ ကစားဖို့ ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ်က ညွှန်ကြား ထားတယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
အီတလီ မှာတော့ ကစားသမား ၁၃ ယောက် ကြံ့ခိုင် နေပါက ပွဲတွေ ကို ဆက်လက် ကစားသွားဖို့ ဆုံးဖြတ် ထားပါတယ် ။
ဘိုလော့နာ နဲ့ အင်တာ မီလန် တို့ ကစားမယ့် ပွဲကတော့ တသင်းလုံး ကွာရန်တင်း ဝင်နေရတဲ့ ဘိုလော့နာ ကြောင့် ပွဲပျက်ပြယ် သွားခဲ့ပြီး ပွဲ ကစားဖို့ ဘိုလော့နာ ကွင်းအထိ ရောက်လာ ခဲ့တဲ့ အင်တာ မီလန် ဟာ ၃-၀ နဲ့ အနိုင် ရရှိ နိုင်ချေ ရှိတယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် ဘိုလော့နာ ကတော့ အယူခံ ဝင်ကာ ပြန်ကန်ပွဲ စီစဉ်ပေးဖို့ တောင်းဆို သွားမယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ကတော့ အမှုဆောင် အက်ဝုဒ်ဝက် ဟာ ဇန်နဝါရီ အကုန်မှာ အသင်းနဲ့ လမ်းခွဲ တော့မှာ ဖြစ်ပြီး ရစ်ချတ် အာနိုး က အမှုဆောင်ချုပ်သစ် ဖြစ်လာတော့မှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဒီကနေ့ ညနေပိုင်းက ကြေညာသွားခဲ့ ပါတယ် ။
မန်ယူနိုက်တက် ဟာ ဒေါ့မွန် နောက်ခံလူ ဒန် အက်ဆယ် ဇာဂါဒို နဲ့ စတင် ပြောဆို ဆွေးနွေး နေပြီလို့လည်း သတင်းထွက်လာခဲ့ ပါတယ် ။
ဝက်ဖိုဒ့် နောက်ခံလူ ဒန်နီ ရိုစ့် ဟာ အသင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့ ဆုံးဖြတ် ထားပြီး ဝက်ဖိုဒ့် ရဲ့ လာမယ့် ပွဲတွေကို ပါဝင် မကစားဘူးလို့လည်း ကလပ်ကို အသိသွားခဲ့ ပါတယ် ။
အာဆင်နယ် ဟာ မန်စီးတီး နဲ့ ပွဲစဉ်တုန်းက ကွင်းလယ်ဒိုင် ကို ဝိုင်းဝန်း စောဒက် တက်မှု နဲ့ ပတ်သက်ပြီး FA က ပေါင် ၂ သောင်း ဒဏ်ငွေ ချမှတ် လိုက်တယ်လို့ ထုတ်ပြန် ကြေညာ သွားခဲ့ ပါတယ် ။
မနေ့ညက ကစားခဲ့တဲ့ ကိုပါ ဒယ်ရေး ပွဲစဉ်မှာ လက်ချောင်းရိုး ကျိုးသွား ခဲ့တဲ့ ဘာစီလိုနာ ကစားသမား ရော်နယ် အာရူဟို ဟာ ဒဏ်ရာကို ကုသဖို့ လနဲ့ ချီပြီး အနားယူရ နိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ် ။
နောက်ခံ အစွန်လူတွေ လိုအပ် လာခဲ့တဲ့ ချဲလ်ဆီး ကတော့ ဘာစီလိုနာ ရဲ့ အမေရိကန် လက်ရွေးစင် ဆာဂျင်နို ဒက်စ် ကို စိတ်ဝင်စားမှု ပြလာတယ်လို့ သတင်းထွက် လာခဲ့ ပါတယ် ။
လိဒ် ယူနိုက်တက် အသင်းဟာ ကလေးငယ်တွေ ကွင်းအတွင်း ပြေးဝင်လာမှုရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဘေးအန္တရာယ်တွေ မဖြစ်ပွားစေ နိုင်ဖို့ အတွက် ကလေးတွေ ဝကွင်းထဲ ပြေးဝင်ပါက သူတို့ နဲ့ အတူ လိုက်ပါ လာတဲ့ မိဘ ( သို့ ) အုပ်ထိန်းသူတွေ ကို တနှစ် ကွင်းတွင်း ဝင်ကြည့်ခွင့် ပိတ်ပင် သွားမယ်လို့ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန် ခဲ့တယ်လို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
မန်စီးတီး နည်းပြ ပက် ဂွာဒီယိုလာ ၊ အီတလီ လက်ရွေးစင် နည်းပြ ရော်ဘတ်တို မန်စီနီ နဲ့ ချဲလ်ဆီး နည်းပြ သောမတ်စ် တူချယ် တို့ ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် အတွက် ဖီဖာ ရဲ့ တနှစ်တာ အကောင်းဆုံး နည်းပြ ဆု အတွက် နောက်ဆုံး စကာတင် စာရင်းမှာ ပါဝင် လာခဲ့ ကြတယ်လို့ သတင်း ရရှိ ပါတယ် ခင်ဗျာ . . . ။
Previous Article အိုရီဂီ ကို ခေါ်ယူဖို့ အရှိန်မြှင့် ကြိုးစားလာတဲ့ နယူးကာဆယ်
Next Article ရိုနယ်ဒို အတွက် အကောင်းဆုံးတွဲဘက်ကို ယူနိုက်တက် တို့ လက်လွှတ်ခဲ့တယ်လို့ အဘွန်လဟော် ဝေဖန်ပြောဆို